Foojignaan iyo fiirsi badan
Soomaliya waxay mareysaa marxad adag oo u baahan foojignaan iyo fiirsi badan marka lala falgalayo. Waayo, waxaa wadanka loo doortey madexweyne cusub oo leh aragti islaami ah, marna ahaan hogaan ay dadka Soomaaliyeed dareemeen inuu yahay mid soo celiyey dadnimadoodii iyo wadaniyadoodii. Xilligaa uu hor kaceyey maxkamadihii dalka dhiniciisa koofureed dareensiiyey aduunka iyo qurba joogta Soomaaliyeedba inay nabad noqon karto.
Waxaa degdeg u gaarey oo dagaal ku qaadey dadkii diidanaa inay dalka hagaan indheer garad aragti diineed leh, iyagga oo is tusay hadii ay guushaas sii socoto inay abuuri karto geed qof kasta oo goomoon, ama diin darteedna lagu galey, uu ka hello gaajo reebkiisa.
Markii la ibba garaacey hashii godolkeeda gobol kasta looga soo guurey si gaaxdeeda loo maalo, lana gawracey nirigtii, ayey ragii golahaas hormuudka u ahaa waxay goobeen xal iyagga u gaar ah waxayna go’aamiyeen inay hubka garabka saartaan, una diidaa ga’ma iyo hoyaad qof kasta oo gacan ka geystey maandeeq gawraceeda.
Markii muddo la garaacayey hadafkii hubka loo qaadey, lana dareemey inuu cadawga soo galey dhulka uu kala saareyn shacabka iyo shiish hayayaasha, ayey qayb ka mid ah halgamayaashii garwaaqsatey bal in dhan kale loo weeciyo sidii loo saari lahaa, oo ay dooneed wadahadal iyo siyaadad wax lagu doono, meesha ay qeyb kalena shiishkii sii wadeen.
Kale duwanaanta aragtiyeed ee saaxiibadii nabadda keenay, midna hubka uu u arkey xalka saarida cadawga, meesha mid kale uu u arkey siyaasad iyo wada hadal, ayaa waxaa uu abuurey inay kale fogaadaan dadaal wadayaashii dadka harka ku forey bartamihii 2006. Waxaa marar badan laysu mariyey warbaahiyeyaasha hadallo kul-kul oo mararka qaar muujinayey sidda saaxiibada u kale durkeen. Waxaan aad u xasuustaan hadalkii uu ninka hadda madaxweynaha loo doortey ka jeediyey maalintii ugu horeysay ee uu shirka Jabuuti ee dib u hishiisiinta bilaabanayey oo ahaa «Hadii aan weynay kheyr aan kale doorano laba shar ayaan kale dooraneynaa» taas oo muujinaysay sidda uu u qanacsanayn wada hadalada uu la gallo dad uu aaminsan yahay inay sabab u ahaayeen dhibaatada dadka iyo dalka haysata, laakiin si dadka iyo dalka loo badbaadiyo waa in la dhibaato midda yar la qaataa.
Waxaa hubaal ah in saaxiibada shalay ay awoodaan, hadii niyad wanaag la muujiyo, xalinta khilaafka u dhexeeya. Waayo, saaxiibkaa hadii uu kaa aragti duwanaado ma aha inuu cadaw noqday ama aad cadaw uu tuurto ee waa inaad ku dadaashaa inaad isagga weynin mar walbana aad garabkiisa istaagtaa.
Waa in hadafka maanta laga dhigaa sidii dadkii isla bilaabey dagaalka ay meel isugu imaan lahaayeen, una heli lahaa dawlad danteedu ay tahay horumarinta bulsha iyo ku dhaqanka diinta islaamka.
Waxaa haboon in wax badan laga fiirsado sidii loo helli lahaa golle wasaaradeed oo ku saleysan aqoon iyo waayo aragnimo, kana fog aragtida qof iyo qoys jeclaysi. Dadka ku heeran madaxweynaha waa inay si ‘fogaan eegid’ ku dheehan tahay ay u raadiyaan dadkii xillalka wasaaradaha iyo maamulka dalka qaban lahaa oo ay ka dheeraadaan aragtida aan dhaafsanay ma iska arkaa madasha wax lagu qeybsanayo.
Waxaa la doonayaa qalinlayda, qeexayaasha iyo qurilaydaba inay xoogooda isugu geeyaan sidii loo badbaadin lahaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed, ee uu la haray hardanka danta guud ka maran ee danaha qof ahaaneed ku salaysan. Hadii aad dib u eegto diidmada Soomaaligga, adigga oo ka dhar tiran aragti hore aad u aaminsanayd, waxaa kuu soo baxaya waa inay danta guud ahayn diidmada. Diidayaasha Soomaaliyeed oo dhan, in yar mooyaane, waa dad ka waayey madashii qeybsiga markaa taagneeyd waxay ku tashanayeen ama ay is tuseen inay mudnaayeen. Dabadeed waxaa u asal noqotey mar hadii aan wayey anigga, bagga dhammaan dadkana ha illa waayo, yey cidna qaadan magac aan anigga waayey helidiisa.
Waxaa tallo ahaan haboon in si fiiro dheer loo xaliyo arimahaan hoos ku qoran:
Xulida wasiirka 1aad, waa in lagu saleeyaa aqoon iyo xilkasnimo qofka xilkaa qabanay, iyada oo aan laga boodeyn ‘qaanuun xujo’ ee wax lagu qeybiyey, si xilligaa balaayo loo gudbiyo inta ka hartey dadkii iyo dalka.
Xallinta khilaafka maanta ee walaalahii shalay dhex yaal waa in geed dheer iyo mid gaaban loo fuulaa, iyada oo sal laga dhiganayo asalka ‘gunta’ Islaamka in la wadaago oo aan lagu kale tagi karin isku aragtina laga ahaado asalka, furuucna ama dadaalada aragtiyeedna, lagu kala duwanaan karo.
Bogsiinta boogaha walaalaha Soomaaliyeed dhexdooda ah ee ama qoys ku salaysan qabiil, lana abuuro jawigii iyo wadooyinkii ay ku baabi’i lahaaayeen Qabiilka siyaasadeysan ama Qabyaalada burburisay wax walba oo qiimo u lahaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Unkid siyaadad akhrin karta taariikhda, kana soo dheehan karta dan dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iyada oo ka dheeraanaysa inay godod la shareeray dushooda oo hoos u dheer ku dhacdo ogaan la’aan, sida marar badan ku dhacdo hagayaasha dalka Soomaaliyeed
Abuuridid golle dhexdhexaadineed oo laga soo xulayo aqoonyahanada Soomaaliyeed oo noqda gunta ay ka soo maaxdaan siyaadaha dalka iyo dadka lagu dhaqayo iyo xallinta muranada dadka iyo dawlada, waana inay noqdaan kuwa ka madax banaan maamulka dawlada marka la magacaabo ka dib.
Ir. Abdulaziz Mohamed (Mataan)